ISuperSport itheze izinduku ezintsha | Isolezwe
ISuperSport itheze izinduku ezintsha
Isolezwe / 6 July 2012, 10:06am / MTHOKOZISI MNCUSENI
PRETORIA, SOUTH AFRICA - JULY 05, Cliford Mulenga, Rose Petersen,Bevan Fransman, Cliford Mulenga and Ronald Mohlaka during the unveiling of SuperSport United's new signings at Groenkloof training grounds on July 05, 2012 in Pretoria, South Africa Photo by Lefty Shivambu / Gallo Images
UMQEQESHI weSuperSport United uGavin Hunt usichaze njengamakinati isabelo abesinikwe abaphathi baleli qembu ukuthi aqinise isikwati sakhe kodwa weneme kakhulu ngabadlali abathengele isizini ezayo.
Lo mqeqeshi uthi kuyamjabulisa ukuthi ukwazile ukuthenga kulokhu kwazise kuhlale kuthengwa abadlali bakhe njalo uma kuvuleke iwindi lokushintshana ngabadlali.
Leli qembu elingompetha beNedbank Cup lethule ngokusemthethweni uBevan Fransman, Innocent Mdledle obekuMamelodi Sundowns, Ronald Mohlaka (Mpumalanga Black Aces), Clifford Mulenga (Bloemfontein Celtic), George Maluleke (Ajax Cape Town) noRoscoe Pietersen (Chippa United) njengabadlali babo abasha izolo emini.
“Kwehlukile kulokhu, yithina esithengile yize benginikwe amakinati, ngenxa yesimo, ukuthi ngithenge abadlali. Okuhle ngami ukuthi ngithenga lapho ngibona kunesidingo khona njengoba ngenzile nakulokhu. Ngeneme kakhulu ngabadlali esibatholile futhi angingabazi ukuthi bazosenzela umsebenzi oncomekayo. Ngeke ngande kakhulu ngomlomo kodwa indlela esenza ngayo enkundleni iyona ezocacisela abantu ukuthi yini eyenza ngikhulume ngale ndlela,” kusho uHunt obhekene nokwenza kahle e-Afrika kule sizini ezokwethwasa.
Okuyikona athe kumthokozise kakhulu uHunt ukuthi uthole uFransman obedlalela iHapoel Tel Aviv yakwa-Israel.
“Uyena ufishi omkhulu kubadlali esibatholile. Uza nesipiliyoni esihle asithole ku-Uefa Champions League kanti nakuBafana Bafana useke wadlala khona. Uzobasiza abafana abancane azodlala nabo emuva ngenxa yalesi sipiliyoni. Ngike ngasebenza naye phambilini ngakho-ke ngiyakwazi engikulindele kuyena. Neminyaka isamvuma,” kusho lo mqeqeshi.
Mayelana noMdledle benoMulenga abanomlando wokungaziphathi kahle lo mqeqeshi uthe: “Ngibathanda kabi abadlali abafika benesizathu sokuvala abathile imilomo njengoMdledle noMulenga abaziwa ngokungaziphathi kahle. URonald yena usemncane futhi uzokhula nathi.”
UHunt owethembise ukuthi uzoxuba abadlali abancane nabanamava.